Customized pallet rack wire decking industrial pallet racks steel pallet rack - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
ခေါ်ရန်ပံ့ပိုးမှု +86 13360306180
ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းများနှင့် Roll ကွန်တိန်နာ
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » သတ္တုသိုလှောင်ဆင် » Customized pallet rack wire decking industrial pallet racks steel pallet rack
ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းကောက်နေဂိုဒေါင်လှောင်အိမ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း box ကိုပုံဖမ်းတွန်းလှည်း
မိုးသည်းထန်စွာ Duty ဂိုဒေါင်သိုလှောင်ထိန်သိမ်းသတ္တုသိုလှောင်ဆင်ရွေ့လျား
ပစ္စည်း: အပျော့စား Q235 သံမဏိ
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: powder coating
loading စွမ်းရည် 1000-2000ကီလိုဂရမ်
stacking 1+3 အလွှာ
ပွောဆို စိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ် OEM ထောက်ခံမှုအာမခံကာလ:5 နှစ်ပေါင်းအာမခံ
ကျော်လွန် 10 ဤမြေကွက်၌နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို.
အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား R ကို&: D အဖွဲ့သည်ထောက်ခံမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံဆွဲသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုအညီ.
အဆိုပါ ISO9001 လွန်:2008 အရည်အသွေးအမှုစနစ် ,SGS,EC
1. မေး: အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့စက်ရုံတည်ရှိရာ? အဘယ်သို့ငါအဲဒီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်?
တစ်ဦးက: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ FoshanCity တွင်တည်ရှိသည်, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ, သင်ကတိုက်ရိုက်ကွမ်ကျိုးလေဆိပ်မှပျံသန်းနိုင်သည်ကွမ်ကျိုးနှင့်နီးစပ်သော. သင်ရရှိနိုင်ပါသည်အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုကြသည်!
2. မေး: သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ကြမ်းကဘာလဲ?
တစ်ဦးက: ယေဘုယျအဖြစ်, သံမဏိ code တွေရဲ့ကုန်ကြမ်း Q235 ဖြစ်ပါသည်. အခွားသောသံမဏိလည်း client များရရှိနိုင်ပါသည်’ လိုအပ်ချက်များ.
3. မေး: ငွေပေးချေမှုများ၏အသုံးအနှုန်းကဘာလဲ?
တစ်ဦးက: ယေဘုယျအဖြစ်, 35% T / T ချသင်္ဘောမရောက်မီငွေပေးချေမှုနှင့်ချိန်ခွင်လျှာ.
4. မေး: ပေးပို့အချိန်ဆိုတာဘာလဲ?
တစ်ဦးက: ဒါဟာအမိန့်အရေအတွက်နှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများပေါ်မူတည်. ယေဘုယျအဖြစ်, အတွင်း 20 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း, သာမန်အမိန့်အရေအတွက်သည်။.
5. မေး: ဘယ်ဆိပ်ကမ်းကိုတင်ဆိပ်ကမ်းကိုအဖြစ်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်?
တစ်ဦးက: ကွမ်ကျိုး nansha port ကို
6, ငါs ကိုထုံးစံized ရရှိနိုင်?
7, သငျသညျဒီဇိုင်းကိုရေးဆွဲစေနိုင်သည် ?
—ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်အမိန့်ရှေ့၌သင်တို့အသုံးပြုမှုအသေးစိတ်နှင့်သင့် Confirm တောင်းနှင့်အညီအကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောဒီဇိုင်းနှင့်ပုံဆွဲစေ.
1. ) အာမခံချက်: —3အမှု၌ ~ 10 နှစ်အာမခံကြောင်း
တစ်ဦးက) Proper handling during operation, မှန်ကန်စွာ forklift ကိုင်တွယ် stacking စဉ် / ကို un-stack
C) Environment request –indoor, ခြောက်သွေ့စိုစွတ်သောမဟုတ်ဘူးအခြေအနေ, မဆိုတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ပါဘူး (ဇင့်ချထားတဲ့နှင့်အမှုန့် coated ထုတ်ကုန်များအတွက်, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပူသို့ကျဆင်းလာများအတွက်န့်အသတ်မရှိ,)
2. စက်ရုံစျေးနှုန်း: စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း.
3. ကျနော်တို့မဆိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုချွတ်ယွင်းမှုအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူ, ပြန်အမ်းငွေဖြစ်စေလိုဒါမှမဟုတ်သင်ဖို့ကောင်းသောထုတ်ကုန် reship
ထိန်သိမ်း stacking သံမဏိစပျစ်ရည်ကိုစည်ထိန်သိမ်း
သတ္တု pallet စက်ရုံစျေးနှုန်းတိုက်ရိုက် racking
အော်တိုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါက် storagestacking ထရပ်ကားသတ္တုယာထိန်သိမ်း
ထိန်သိမ်း stacking ပူရောင်းချသတ္တုဂိုဒေါင်သိုလှောင်မှု
မော်တော်ဆိုင်ကယ် Pallet Post ကိုသံမဏိ Pallet ထိန်သိမ်း
ထိန်သိမ်း stacking စက်ရုံစျေးနှုန်းစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားသံမဏိတာယာ
Foshan Yougu သိုလှောင်ပစ္စည်း Co. ,, Ltd မှဒီဇိုင်းကိုအထူးပြုနှင့်သတ္တုဂိုဒေါင် Logistic သိုလှောင်မှုကွန်တိန်နာအမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်,လှောငျအိမျ, pallet, ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း, ထိန်သိမ်း stacking,လုံးဝသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည့်စသည်တို့ pallet.
ခေါက်သတ္တုလှောင်အိမ်၏ function ကိုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ
ဇွန် 24, 2020
ဇွန် 22, 2020
အဘယ်ကြောင့်ဂိုဒေါင် pallet 5S ကစီမံခန့်ခွဲရပါမည်
မေ 02, 2020
.ပြီလ 30, 2020
Yougu ကုန်ပစ္စည်းအသစ် - သံစင်
.ပြီလ 28, 2020
Foshan Yougu သိုလှောင်ပစ္စည်း Co. , Ltd မှ © 2020 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ